Tallaabooyinkan fudud si aad u hagaagsan iyo Soo Celinta Your iPhone la iCloud
Maalmahan markii badan oo naga mid ah waxay leeyihiin qalab badan dijitaalka si ay u qabtaan ganacsigayaga ama la taas oo aan ku xidhmaan internet-ka, iCloud waxay naga caawinaysaa in ay sii qalabka beehsa. In si kale loo dhigo iCloud waa adeeg kaydinta daruur Apple ee la kaas oo xogta digital sida waraaqaha, sawiro, iyo music waxaa ku kaydsan Server-fog hubinta in user leeyahay marin buuxa u hesho macluumaadka u download in macruufka, Macintosh ama aaladaha kale ee Windows, taas oo markaas ay awoodaan wadaagi u dir, kuwa kale ee isticmaala iyo sidoo kale qalabka ay u maareeyaan Apple. Mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan iCloud ee waa awood u leeyahay inuu u hagaagsan iyo soo celinta iPhone la iCloud.
Talaabooyinka si ay awood iCloud gurmad on iPhone
1. Maxaa loo baahan yahay in la sameeyo waa in lagu xiro aad iPhone inay shabakad Wi-Fi.
2. Tallaabada labaad waa in ay ka jaftaa Settings> iCloud> kaabta ee lagu daydo ugu dambeeyey; macruufka 8 iyo ka dib ama tuubada Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta loogu daydo ka weyn; macruufka 7 ama ka hor. Waxaa muhiim ah halkan si aad u hubiso in kaabta iCloud waa xaqiiqo ah oo firfircoon.
3. Marka Back wuu rogmadaa tubbada Back ilaa Hadda. Hubi in uu sii joogo xiran si aad network Wi-Fi ilaa habka 100% dhamaystiran.
4. Si aad u hubiso habka waa baaritaan dhameystiran dib ay siyoodba Settings> iCloud> Kaydinta> Maamul Kaydinta, ka dibna xulashada qalabka doorashada. Markii ugu danbeysay oo dib ugu waa in muuqan oo ay la socoto faahfaahinta wakhtiga iyo gurmad size.
Ka sokow gacanta taageerto kor u info oo ku saabsan qalab aad, iCloud si toos ah u badbaadiyay waxa ku saabsan qalabka maalintii hal mar markii qalabka yihiin gagadin, qufulan, iyo recharging. Laakiin maxay tahay dhabta iCloud dib? Macluumaadka ku saabsan qalabka aad:
• Taariikhda Iibso u filimada, muusikada, barnaamijyadooda, bandhigyada TV, iyo buugaag, si kastaba ha ahaatee, waxa ay wax ku badbaadin content ee aad iibsatay macluumaadka oo keliya ka kooban. Haddii aad u baahan tahay in la soo celiyo aad iibsatay, waxaad kala soo bixi waxay si toos ah oo ka "Store".
• Videos iyo Sawirro ku saabsan qalabka macruufka aad
• goobaha Device
• macluumaadka codsiga
• Sida aad screen Home iyo codsiyada loo soo agaasimo
• iMessages Your, qoraalka (SMS), iyo farriimaha MMS
• doortay Ringtones
• Xogta Caafimaadka
• qaabeynta Home-Kit
Ka macruufka Qalabka kabsado Data o
Soo Celinta ka iCloud iyo bedelo oo dhan xogta jirta.
Xogta celinta ka iCloud noqon kartaa si gaar ah faa'iido marka aad gadaneyso qalab cusub oo aad rabto in aad si ay u helaan xogta aad ka qalab hore. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid waxtar leh marka celinta phone dib warshad.
Xogta celinta waxaa loo sameeyaa sida sidaas:
1. aad macruufka qalab, tuubada Settings> General> Software Update iyo raac tilmaamaha onscreen.
2. Wixii qalab macruufka ah 8: Tag Settings> iCloud> Kaydinta> Maamul Kaydinta> qalab (ku hoos qoran hayaan). Wixii macruufka 7 aalad: Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta> Maamul Kaydinta, doorato aalad lagu hoos qoran hayaan.
Setup Kaaliyaha 3.> Tubada Calan qalab aad> Soo Celinta kaabta> Gal iCloud.
4. Marka saxiixay "Dooro gurmad," ka liiska laga heli karaa u soo xulay, in uu badbaadeen in iCloud.
5. iPhone wuxuu bilaabi lahaa dib u soo celinta iyo ku qaadan lahaa oo keliya dhowr daqiiqadood.
6. Ka dib markii la xirey kadibna qalab aad, goobaha iyo xisaab aad u leeyihiin in ay la soo celiyo oo kaabta bilaaban doono ka dib markii uu soo degsado barnaamijyadooda aad soo iibsatay music ,, muujinaya TV, Roll Camera, buugaagta, iyo waxyaalaha kale ee buuxda loo soo celiyo.
Xulo soo celiyo files ka iCloud
Data furaysaan dhacdo waqti ka waqti iyo sida aynu wada ognahay badiyay xog muhiim ah u noqon kara murugo leh in ugu yaraan ama xumi haddii ay timmaado ba'an marka ay timaado macluumaad la xiriira ganacsiga. Oo weliba, inkastoo qaar badan oo naga mid ah ayaa laga badiyay xog muhiim ah waxaan weli u muuqdaan in ay ku kaydiso, kuwaas on our casriga ah ama qalab mobile aan ka fikirin ee raad ku badiyay info sida ku soo dejin doonaa.
Inkastoo aad u soo celin kartaa qalab aad ka gurmad iCloud si aad u hesho files ka dib, waxaad dhan xogta jirta Khasaaray aad telefoon inta lagu guda jiro soo celinta dhamaystiran. Tani waa meesha Wondershare Dr.Fone ee macruufka ku yimaado. Waxaad dooran kartaa in eegista soo kabsado files kaga imaanayo iCloud, oo aan laga badinin xogta jirta telefoonka.
1. Ka dib bilowga Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, dooro "kabsado iCloud ee kaabta faylasha" mode. Waxaad ku qortaa account iCloud iyo password inay gasho.
2. Ka dib markii aad soo gasho si aad iCloud, barnaamijka qor doonaa oo dhan la xiriira files gurmad xisaabta this. Dooro mid ka mid ah aad doonaysid in aad ka soo kabsado files ka guji Download.
3. suuqa kala popup ah, waxaad dooran kartaa noocyada file aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo ah. Markaas guji Scan.
4. Marka scan la soo gabagabeeyo, waxaad ku eegaan karo files aad jeclaan lahaa inuu ka soo kabsado. Sax waxyaabaha aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji badhanka Ladnaansho.
Hadda xiriirada, fariimo iyo qoraalo si toos ah kabsaday kartaa qalab macruufka ah haddii aad iPhone, iPad ama iPod xiriiri xiran yahay your computer la cable USB ah inta ay socoto dib u soo kabashada.
> Resource > iCloud > tallaabooyinkan fudud si aad u hagaagsan oo la soo celiyo aad iPhone la iCloud